Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Aogositra 2010
Milaza i Said Bellari, mpanoratra ho an'ny Moroccoboard.com, mikasika ny fanalàna tsikelikely ny fiankinan-doha amin'ny teny Frantsay, ary ny fampidirana ny teny Anglisy ho teny ofisialy faharoa ampiasaina any Maraoka. Ao amin'ny boky nosoratany, manolotra ny fomba fijery tena tsara voatra fantatra amin'ny hoe “fanalàna fahaizana mamaky teny sy manoratra”...
Arabia Saodita25 Aogositra 2010
Dr Ghazi Al Gosaibi. Sary avy amin'ny takelaka mpankafy ao amin'ny Facebook. Arabia Saodita sy Bahrain misaona ny fahalasanan'ny olona manan-tsaina izay nitondra anjara biriky lehibe teo amin'ny lafiny kolontsaina sy ny fampivelarana ny sehatra teo amin'ny firenena roa tonta mifanolo-bodirindrina. Ghazi Al Gosaibi, mpanao tononkalo, mpanoratra, masoivoho sy ministra,...
Amerika Latina25 Aogositra 2010
Ny Oliravina Mexico 2010, Jimena Navarrete, no nibata fandresena tamin'ny fifaninanana Oliravin'ny Tontolo tamin'ity taona ity. Naneho ny hafaliany noho ny fandresen'i Navarrete ireo Meksikana maro mpampiasa Twitter; na izany aza, misy ireo sasantsasany manakiana ny fanomezan-danja be loatra ilay hetsika raha miohatra amin'ireo hafa , izay resaka mavesa-danja kokoa....
Amerika Latina24 Aogositra 2010
Afrika Mainty23 Aogositra 2010